<<first <prev 1234567 (8)910 next> last>>
SS501 Music Band
Posted By - Ko Ko - August 22, 2010
About SS501 (Wikipedia)
SS501 Music Group
ကိုးရီးယား အဆိုအဖွဲ့ SS501 (နှုတ်ဖြင့် ရွတ်ဆို ရာတွင် Double-S 501 ဟု အသံ ထွက်ပြီး ကိုးရီးယား လို Deo Beul E Seu Oh Gong Il ဟု အသံထွက် ပါတယ်) ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Daesung Entertainment မှ တည်ထောင် ခဲ့ ပါသည်။
SS သည် "Super Star" ရဲ့ အတိုကောက် ဖြစ်ပြီး၊ 501 မှာ "ငါးဦး ထာဝစဉ် လက်တွဲ ကြမည်" ကို ကိုယ်စား ပြုပါတယ်။ စတင်ခဲ့ စဉ်မှစပြီး အရှေ့အာရှ တခွင်မှာ အထူး နာမည်ကြီး ကျော်ကြား ခဲ့ပါတယ်။ ကိုးရီးယား၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင် နဲ့ ဂျပန် တို့မှာ အလွန် နာမည် ကြီးခဲ့ ပါတယ်။
SS501 ရဲ့ အဆိုအဖွဲ့ဝင် ၅ဦး ကတော့ Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng, Kim Kyu Jong, Park Jung Min နဲ့ Kim Hyung Joon တို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
SS501 having fun duringarest time
ဝိုင်းခေါင်းဆောင် Kim Hyun Joong ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က နာမည်ကျော် Boys Over Flowers (F4) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် ခဲ့ပြီး အလွန် လူသိများ နာမည် ကြီးလာ ခဲ့ ပါတယ်။ June 28, 2010 မှာ Kim Hyun Joong ဟာ SS501 အဖွဲ့မှ တရားဝင် နှုတ်ထွက် သွားပါတယ်။
August 10, 2010 မှာ နောက် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Park Jung Min ဟာ တစ်ခြား ကုပ္မဏီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ CNR Media နဲ့ တစ်ဦးခြင်း (solo) လှုပ်ရှားဖို့ စာချုပ်ချုပ် သွားပါတယ်။ SS501 အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုတော် အဖြစ် ကတော့ နှုတ်ထွက်ခြင်း မရှိသေး ပါဘူး။
လောလောဆယ် Kim Hyung Joon က တတိယ မြောက် နှုတ်ထွက်ဖို့ ကြိုးစား နေပါတယ်၊ သူကတော့ S Plus Entertainment ကိုယ်စါးလှယ် agency နဲ့ ပြောင်းပြီး စာချုပ်ချုပ် ဖို့ ညှိနှိုင်း နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
တည်ထောင် စဉ်က 501 ဟာ "ငါးဦး ထာဝစဉ် လက်တွဲ ကြမည်" ကို ကိုယ်စား ပြုခဲ့ ပါတယ်။ အခုတော့ တချွေချွေ နှုတ်ထွက် နေကြလေတော့ SS501 အဆို အဖွဲ့ရဲ့ နောင်ရေး ဘယ်လို ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာ ရင်လေး စရာ ဖြစ်နေ ပါပြီး။
Birthday: June 6, 1986 (1986-06-06)
Birthday: November 3, 1986 (1986-11-03)
Birthday: February 24, 1987 (1987-02-24)
Notes: Kim Kyu Jong, along with Park Jung Min, were DJs for SBS's "Youngstreet" radio. He isamember of SS501 subgroup.
Birthday: April 3, 1987 (1987-04-03)
Birthday: August 3, 1987 (1987-08-03)
SS501 အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင် များမှာ အောက်ဖေါ် ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Lonely Girl (�Bad Girl Diary� OST)
Mini Album � Find
Mini Album � U R Man
Mini Album � Collection
Let�s Break Away
1st Concert DVD � Step Up � Released: December 4, 2006 [Korean Version]
1st Concert in Osaka � Released: March 28, 2007 [Japanese Version]
Documentary of Heart to Heart � Released: December 24, 2007 [Japanese Version]
Special Event Tour Heart to Heart � Released: February 6, 2008 [Japanese Version]
1st Maxi Single in Japan Special DVD � Released: 2008 [Japanese Version]
1st Album in Japan Special DVD � Released: 2008 [Japanese Version]
Music Clip Vol.1 DVD � Released: July 16, 2008 [Japanese Version]
2008 Japan Tour DVD � Released: September 17, 2008 [Japanese Version]
The Mission DVD � Released: May 13, 2009 [Japanese Version]
Showcase with Triple S DVD � Released: July 24, 2009 [Japanese Version]
5 Men in5Years in 2005~2009 MBC DVD Collection � Released: November 2009
Thank You For waking Us Up! (Hosted by Park Kyung Lim)2005
Thank You For Raising Me Up! (Sequel to Thank You For Waking Us Up!)2005
Boys Over Flowers (Kim Hyun Joong)
Hyung Jun BecomesaProgamer (of Starcraft, produced by MBC Game)2010
SS501 Park Jung Min Onstyle Magazine What Women Want
SS501 Romance Sky
SS501 Super Viking
Best New Male Group Award � M.net KM Music Festival 2005.11.27
Best New Male Group Award � SBS Gayo DaeJeon 2005.12.29
Best New Male Group Award � MBC 10th Gasoo Gayojae 2005.12.31
Best Dance Group Award � M.net KM Music Festival 2006.11.2
Netizen Popularity Award � SBS Gayo DaeJeon 2006.12.29
Best 10 New Artist - Japan Gold Disc Award, Japan 2008.03.04
Best Asian Artist Award � Asia Song Festival 2008
32nd Cyworld Digital Music Awards (Song of the Month � Feb) - 2009.03.28
Mnet Asian Music Awards � Best OST Award (SS501's Because I'm Stupid- Boys Over Flowers)
Tags: korean singer | korean music | korean music band | korea
Summary - SS501 isaSouth Korean boy band under management of Daesung Entertainment. The name of the band isacombination of the alphabet and numbers that have special meanings in them. The first -S- stands for -Super-. The second -S- is an abbreviation for -Star-. The number 5, 0, and 1 means five members united as one forever. SS501 debuted on June 8, 2005 with their first single -Kyeonggo. Since the debut, the band is highly successful through Asia especially, China, Hong Kong, Tiawan, Japan and Korea. Band leader Kim Hyun Joong was part of the cast for the Korean version of Hana Yori Dango, officially named Boys Over Flowers or [F4]. It was broadcast on KBS in the first half of 2009, and was very popular. On June 28, 2010, it was officially announced that the groups leader, Kim Hyun Joong, signedacontract with KeyEast Entertainment. On August 10, 2010, Park Jung Min has officially left DSP Entertainment like Kim Hyun Joong and joined another company called CNR Media. He has not left SS501, but he joined CNR Media to becomeasolo artist. It is unclear whether SS501 will stay asagroup, or pursue individual careers.
17 comments submit comments
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/497/ss501-music-band
Hot News-25 July 2010
Posted By - Ko Ko - July 26, 2010
ကွယ်လွန်ပြီးမှပြုလုပ်သော Fan Meet
မကြာမှီ က သတ်သေပြီး ကွယ်လွန် သွားသော မင်းသား Park Yong-ha (32) အတွက် အောက်မေ့ သတိရပွဲ အခမ်းအနား ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ Yurakucho Hall တွင် July 20 ကပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
၄င်း အခမ်းအနား မှာ ပရိသတ် မပြတ် ကဖြင့် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၆.၂၀ အထိ ကြာမြင့် ခဲ့ပါသည်။ အောက်မေ့ ပွဲကို မူလ မကွယ်လွန် မှီက fan meet ပြုလုပ်ရန် စီစဉ် ထားသော နေရာတွင် ပင်ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
Source : Late Park Yong-ha Still Lives in Japanese Fan's Mind
Bread, Love and Dreams (KBS2) ဇာတ်လမ်း တွဲသည်၊ ဇူလိုင် ၁၂ မှ ၁၈ ရက်အတွင်း rating ၃၆.၄ ရာနှုံး ဖြင့် #1 လူကြိုက် အများဆုံး နေရာတွင် ရောက်ရှိခဲ့ ပါသည်။ သရုပ်ဆောင် များမှာ မင်းသား Yoon Si-yoon နှင့် မင်းသမီး Eugene တို့ဖြစ်ကြ ပါသည်။
ယခင် ပထမ နေရာတွင် ရှိခဲ့သော Dong Yi (MBC) ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ rating ၂၉.၄ ရာနှုံးဖြင့် ဒုတိယ နေရာသို့ ရောက်ရှိ သွားပါသည်။
Source : "Bread, Love and Dreams" tops TV charts once again
Ryoo Jin 'I Was Happy While Playing
Lovely Character Han Do Hoon'
မင်းသား Ryoo Jin (38) သည် သရုပ် ဆောင်သက် ၁၄ နှစ်ကျော် လုံးလုံး စိတ်ပုတ် မင်းသား နေရာ တွင်သာ သရုပ်ဆောင် ခဲ့ ရာမှ၊ Secret Agent Miss Oh (KSB2) ဇာတ်လမ်း တွဲတွင် ထူးခြားသော အသွင် သစ်ဖြင့် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသည်။
Secret Agent Miss Oh တွင် Ryoo Jin သည် အူတူတူ ယောင်နန ခင်မင် ဖွယ်ရာ အသွင်ဖြင့် သရုပ်ဆောင် သွားခဲ့ ပုံကို ပရိသတ် အထူး သဘောကျ နှစ်သက် နေကြသည် ဟု သိရှိရ ပါသည်။
Source : Ryoo Jin 'I Was Happy While Playing Lovely Character Han Do Hoon'
Park Jae-beom officially signs with SidusHQ
Jae Bum အေဂျင်စီအသစ်ခန့်အပ်ခြင်း
2PM အဆိုအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း Jae Bum သည် နာမည်ကြီး ကိုးရီးယား အေဂျင်စီ SidusHQ အား၎င်း၏ အာရှ ကိုယ်စလှယ် အဖြစ်ခန့်အပ် လိုက်ပါသည်။
SedusHQ သည် ကိုးရီယား ၏ ထိပ်တန်း agency တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် Jo In-Seong, Jeon Ji-hyeon, Han Ye-seul စသူ တို့၏ agent လည်းဖြစ် ပါသည်။
Source : Park Jae-beom officially signs with SidusHQ
သရုပ်ဆောင် များဟာ ဒီအိမ် တွေမှာ ကျွန်တ်ာကျွန်မ တို့ ကြိုက်လွန်းလို့ နေထိုင် နေကြ ပါတယ် ဆိုပြီး ကန်ထရိုက် တိုက်တွေ အတွက် ကြော်ငြာ ခဲ့ကြလို့ လူတွေက အဟုတ်မှတ်ပြီး တိုက်တွေ အိမ်တွေ ဝယ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒီလို ကြော်ငြာ ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေ ထဲမှာ Lee Young-ae, Jang Dong-gun, Kim Tae-hee, Son Ye-jin, စသူ တို့လည်း ပါကြ ပါတယ်။
Source : Where Do Stars Who Advertise Apartments Live?
Hyeon Bin may enter military in early November
မင်းသား Hyun Bin စစ်ထဲဝင်တော့မည်
မင်သား Hyun Bin သည် လာမည့် နိုဝင်ဘာ လတွင် စစ်မှု ၂ နှစ် ထမ်းဆောင် ရန် စစ်ထဲဝင် တော့မည်ဟု သိရ ပါသည်။
Hyun Bin သည် My Name is Kim Sam-soon ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြင့်နာမည် ကြီးလာ ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် Song Hye-kyo (အွန်စော) ၏ boy friend လည်းဖြစ် ပါသည်။
Source : Hyeon Bin may enter military in early November
ကိုးရီးယား အဆိုအဖွဲ့ SS501 သည် Taiwan တွင်အထူး အောင်မြင်မှု ရနေ သည်ဟု သိရ ပါသည်။ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က ဖြန့်ချီ ခဲ့သော DESTINATION သီချင်း album သည် copy ၃၀၀၀၀ ကျော် ရောင်းချ ခဲ့ရပြီး musiic charts များ၏ #1 နှင့် #2 နေရာ များကို ဆက်တိုက် နေရာ ယူထား သည်ဟု သိရ ပါသည်။
Source : SS501 takes over music charts in Taiwan
Lee Byeong-heon testifies at Kang Byung-kyu trial
Kang Byung-kyu ဆိုသည့် သူသည် မနှစ် ဒီဇင်ဘာ လက မင်းသား Lee Byeong-Heon ရိုက်နေသည့် IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကွင်းတွင် လာရောက် ရမ်းကားမှု ဖြင့် ရဲက အမှုဖွင့် ရူံးတင် ခဲ့ပါသည်။
ထိုအမှု အတွက် Lee Byeong-Heon သည် ရုံးတော်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရကိနေ့က သက်သေ ထွက်ဆိုချက် ပေးသွား သည်ဟု သိရပါသည်။
Source : Lee Byeong-heon testifies at Kang Byung-kyu trial
လွန်ခဲ့သော တစ်လကျော် က မင်းသား Kwon Sang-woo သည်ကား ၂စီးကို သူ့ကားဖြင့် တိုက်ပြီး ထွက်ပြေး သွားခဲ့ ပါသည်။ နောက်ရက် အနည်းငယ် ကြာမှ ရဲသို့ ရောက်ရှိ သတင်း ပို့ခဲ့ ပါသည်။
ထိုအမှု အတွက် မင်းသားသည် ဝမ် ၅ သန်း (US$4200) ခန့် ဒါဏ်ငွေ အရိုက် ခံရ ဖွယ်ရာ ရှိသည် ဟုသိရ ပါသည်။
Source : Actor Kwon faces W5 million fine for hit-and-run
မြန်မာများ အွန်စောငယ် ဟုသိထား ကြသည့် မင်းသမီး Moon Geun-yeong သည် Closer ဟု အမည် ရှိသည့် စင်တင် ပြဇာတ် တွင်ပါဝင် ကပြမည် ဟုသိရ ပါသည်။ ၄င်းပြဇာတ် ကို မင်းသား Eom Gi-joon နှင်တွဲဖက်ပြီး ၂လ ကြာကပြ ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
Moon Geun-yeong turns stripper in play "Closer"
ကျွန်မ လက်ထပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေး ပါဘူးလို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခုမှာ မင်းသမီး Kim Hye-soo (39) မှ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆို သွားပါတယ်။
မင်းသမီး Kim Hye-soo သည်ဇာတ်ရံ မင်းသား တစ်လက် ဖြစ်သူ Yu Hae-jin နှင့် ပေါ်ပေါ် ထင်ထင် date လုပ်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။
Source : Kim Hye-soo says "have no marriage plans yet"
Can Yoo Jin add something new to beauty scene?
မင်းသမီး Eugene (29) ဟာ Get It Beauty လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ရုပ်သံ အစီ အစဉ်မှာ အမျိုးသမီး များအလှ ပြင်ရာမှာ သတိ ပြုသင့် တဲ့အချက် များကို တင်ပြ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Eugene ဟာ မနှစ် ကလည်း လူကြိုက် များခဲ့တဲ့ Yoo Jin's Beauty Secret အမည် ရှိတဲ့ အလှ ပြင်နည်း အကြံပြု စာအုပ် တစ်အုပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါ သေးတယ်။
Source : Can Yoo Jin add something new to beauty scene?
ပြသနာဖြစ်နေတဲ့မင်းသား Choi Cheol-ho
မင်းသား Choi Cheol-ho (40) ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က လက်ရောက် ကြူးလွန်မှု (assault) နဲ့ စစ်ဆေးမှု များပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားဟာ ပထမ တော့ မဟုတ်ဖူး လို့ငြင်း ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ လုံခြုံရေး ကင်မရာမှာ (surveillance camera) အရက် သောက်ရင်း အတူပါ မင်းသမီး တစ်ဦးကို တိုက်ခိုက် ခဲ့တာ ပေါ်ထင်ကြီး တွေ့ရမှ ဝန်ခံ ပါတယ်။
မင်းသားဟာ သူ့ရဲ့ အပစ် တွေကို ဆေးကြောတဲ့ အနေနဲ့ လက်ရှိ သရုပ်ဆောင် နေတဲ့ နာမည်ကျော် Dong Yi ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ နှုတ်ထွက် တော့မယ် လို့ကြေငြာ သွားပါတယ်။
Source : Choi admits assault, will leave TV role
မင်းသား Won Bin နဲ့ မင်းသမီး Kim Sae-ron တို့ဟာ ဒါရိုက်တာ Lee Jeong-beoml ရဲ့ The Man From Nowhere အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
တချို့ action ခန်းတွေဟာ အသက် အန္တရာယ် ရှိလောက် တဲ့အပြင်၊ မျက်လုံးကန်း နိုင်တဲ့ အခန်းတွေ ပါတယ် လို့လည်း ထုတ်ဖေါ် ပြောဆို ပါတယ်။
Source : Won Bin: 'I Almost Killed Myself While Filming Action Scene'
Lee Wan and his sister Kim Tae-hee
စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့ Wan Bin
မင်းသား Won Bin ဟာ ဇွန်လိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ က ၂နှစ်တာ စစ်မှုထမ်း ရန်အတွက် စစ်ထဲဝင် သွားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Won Bin ဟာ နာမည်ကျော် မင်းသမီး Kim Tae-hee ရဲ့ မေါင်ငယ် ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Actor Lee Wan Starts His Military Service
မင်းသမီး Kim Yoon-jin ရဲ့ရုပ်ရှင်သစ်
မင်းသမီး Kim Yoon-jin (37)ဟာ မင်းသား Park Hae-il နဲ့ တွဲဖက်ပြီး The Confrontation အမည် ရှိတဲ့ လျှို့ဝှက် သဲဖို ရုပ်ရှင် ကားသစ် တစ်ကား ရိုက်ကူး တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Kim Yoon-jin ဟာ ဝင်ငွေ အလွန်ကောင်း ခဲ့တဲ့ Shiri (1999) ရုပ်ရှင် နဲ့ စတင် နာမည် ရခဲ့ ပါတယ်။ နောက်တော့ ကမ္ဘာကျော် USA TV ဇာတ်လမ်တွဲ LOST မှာ ပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာသိ မင်းသမီး ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။
Source : Kim Yoon-jin to star in new suspense film with Park Hae-il
US Billboard အဆင့် ၂၁ မှာချိတ်ခဲ့တဲ့ Wonder Girls
Wonder Girls အဆို အဖွဲ့ရဲ့2Different Tears အမည် ရှိတဲ့ သီချင်းဟာ USA Billboard 100 မှာ ဇွန်လိုင်လ ၇ ရက်နေ့က အဆင့် ၂၁ မှာ ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။
မနှစ် ကလည်း ၄င်းတို့ရဲ့ Nobody သီချင်းဟာ USA Billboard 100 မှာ အဆင့် ၇၆ ရခဲ့ ဖူပါတယ်။
Source : Wonder Girls album debuts 21st on US Billboard Charts
CNN Asian website CNNGO ရဲ့ သုံးသပ်ချက် အရ Korea's 20 hottest male celebs ခေါင်းစဉ်နဲ့ တန်းစီ ဇယား တစ်ခု တင် ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
1# -Jang Dong-gun, 2# - Won Bin, 3# - Bae Yong-joon ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ စါရင်း ကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Source : South Korea's 20 hottest male celebs (CNN)
မင်းသမီး Kim Ah-joong ရဲ့ စါအုပ် "Emotional Communication" ကို Seoul National University, media studies curriculum ရဲ့ စါရင်းဝင် စာအုပ် တစ်အုပ် အဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Kim Ah-joong ဟာ 200 Pound Beauty ရုပ်ရှင်နဲ့ နာမည် ကြီးလာတဲ့ မင်းသမီး ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Actress Kim Ah-joong's Book Used For University
President of Beijing Huajia University
and Korean hallyu star Jang Nara
Hallyu မင်းသမီး Jang Nara ကို Beijing Huajia University မှာ associate professor အဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်တယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Jang Nara to be associate professor at university in Beijing
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/496/hot-news-25-july-2010
The Top9Female Idols In A Summer Wears Ranked
Posted By - Ko Ko - July 9, 2010
The top9female idols inabikini ranked by www.allkpop.com
များမကြာမှီက allkpop.com က ကိုးရီးယား female idols အချို့ကို ဘယ်သူပို စွဲမက်စရာ ကောင်းတယ် ဆိုတာ ငယ်စဉ် ကြီးလိုက် တန်းစီဇယား ဆွဲထား တာကို ဗဟုသုတ အဖြစ် တင်ပြ အပ်ပါတယ်။
9th: Kwon Yuri (Born: 1989, Height: 167cm, Weight: 45kg)
8th: Seohyun (Born: 1991, Height: 168cm, Weight: 48kg)
7th: YoonA (Born: 1990, Height: 165cm, Weight: 47kg)
6th: Lee Min Jung (Born: 1982, Height: 167cm, Weight: 49kg)
5th: Ga-In (Born: 1987, Height: 163cm, Weight: 43kg)
4th: Go Eun Ah (Born: 1988, Height: 171cm, Weight: 45kg)
3rd: Park Gyuri (Born: 1988, Height: 162cm, Weight: 45kg)
2nd: UEE (Born: 1988, Height: 171cm, Weight: 51kg)
And finally, 1st place goes to none other than: Park Kahi
(Born 1980, Height: 168cm, Weight: 50kg)
The top9female idols in summer wears ranked
Tags: korean idols | korean news | korea
Summary - Allkpop.com tried to rank Korean female idols in summer wears comes up as foloows. 9th, Kwon Yuri (Born-1989, Height-167cm, Weight-45kg). 8th, Seohyun (Born-1991, Heigh-168cm, Weight-48kg). 7th: YoonA (Born-1990, Height-165cm, Weight-47kg). 6th: Lee Min Jung (Born-1982, Height-167cm, Weight-49kg). 5th, Ga-In (Born-1987, Height-163cm, Weight-43kg). 4th, Go Eun Ah (Born-1988, Height-171cm, Weight-45kg). 3rd, Park Gyuri (Born-1988, Height-162cm, Weight-45kg). 2nd, UEE (Born-1988, Height-171cm, Weight-51kg). And finally, 1st place goes to Park Kahi (Born-1980, Height-168cm, Weight-50kg). After Schools fierce leader Kahi has always been praised for havingaperfectly body, with the combination of her long legs, slim body, and luxurious abs. Despite being the oldest idol on the list, she proves that age is nothing butanumber. It might be that this list was quite accurate or maybe way off.
7 comments submit comments
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/495/the-top-9-female-idols-in-a-summer-wears-ranked
Posted By - Ko Ko - June 30, 2010
Actor Park Yong-ha discovered dead at home
(Breaking News) - Hallyu မင်းသားကြီး Park Yong-ha ကို နေအိမ်မှာ မိမိ ကိုယ် မိမိ သတ်သေပြီးး သေဆုံး နေတာကို ယနေ့ နံနက် (30th June 2010) တွေ့ရှိ ခဲ့ရလို့ အနုပညာ ပရိသတ် ကြီး တစ်ရပ်လုံး အံ့သြ တုန်လှုပ် သွားခဲ့ ပါတယ်။
မနေ့ ညနေ ( (29th June 2010) မှာ Park Yong-ha ဟာ မကြာမှီ ရိုက်တော့ မဲ့ Love Song - Drama အတွက် producer နဲ့ ချိန်းထား ရောက် မလာ ခဲ့ပါ။ မန်နေဂျာ မှ မင်းသား နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ဘူး လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
မင်းသား စိတ်ဓါတ် ကျနေတဲ့ ပုံနဲ့ အခု တစ်လော တွေ့နေ ရတယ် လို့လည်း ပြောကြ ပါတယ်။ သူ့အဖေ ကင်ဆာ ရောဂါ ရနေတော့၊ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတယ် လို့ပဲ ထင်နေ ကြပါတယ်။
ယနေ့ မနက် မှာတော့ မင်းသားကို ၄င်းရဲ့ အခန်း ထဲမှ ဆွဲကြီုးချ သေဆုံး နေတာကို မိခင် ဖြစ်သူမှ တွေ့ရှိ ခဲ့ရတယ် လို့ ဆို ပါတယ်။
မနေ့ည က ဖခင် ဖြစ်သူကို နှိပ်ပေး နေရင်း "ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ပါဘူး" လို့ အထပ်ထပ် ပြောပြီး သူ့အခန်း ထဲဝင် သွားတာ နောက်ဆုံး အသက် ရှင်လျက် တွေ့လိုက် ခြင်းပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
Park Yong-ha the actor
Park Yong-ha ဟာ သေဆုံးတဲ့ အချိန်မှာ အသက် ၃၂ နှစ် ရှိပါပြီး၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ KBS ရဲ့ Love Blossoms in the Classroom ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ သရုပ်ဆောင် လောကကို ခြေချ ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ နာမည်ကျော် Winter Sonata ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ Hallyu star ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ကပြတဲ့ မင်းသား ပါဝင်တဲ့ One Air ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာလည်း အထူး နာမည် ကြီးခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသားဟာ Love Song လို့အမည် ပေးထာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသမီး Yoon Eun-hye နဲ့တွဲဖက် ရိုက်ကူး ဖို့ အဆင်သင့် လုပ်နေဆဲ လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
မင်းသားကြီး Park Yong-ha ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ။
Park Yong-ha the singer
Profile of Park Yong-ha
Name: Park Yong Ha (Park Yeong Ha)
Date of death: 2010-Jun-30 (Suicide)
Tags: korean actor | korean news | korea
Summary - Park Yong-ha,aKorean actor and singer, was found dead at his home in Seoul early Wednesday morning in what appeared to beasuicide, police said. Parks body was found at his home in Nonhyun-dong, southern Seoul, at around 5-30 a.m. by his mother, police said, noting that he appeared to have hanged himself. No suicide note has been found. According to his family, Park said [I am sorry. I am sorry] last night after massaging his father, who is terminally ill with stomach cancer. His family and acquaintances said Park had been severely distressed by his fathers disease. The 32-year-old actor and singer, who debuted in 1995, is widely known across Asia for his role in the 2002 hit drama series [Winter Sonata] and has also released song albums. Last month, Park was cast as the leading role foraKorean television drama, which isaremake of the popular 1996 Hong Kong film, [Comrades, AlmostaLove Story]. The shooting was set to begin in July.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/494/actor-park-yong-ha-found-dead-in-apparent-suicide
Rendering time 0.0119 sec **
715d64d0eab74c8c6ace621b352731ed - January 22, 2018 - 6:41:26 am